Niantso fahamailoana ny filoha Rajoelina: efatra indray ireo tratran’ny coronavirus ka zazalahy 13 taona ny iray | NewsMada
Par Taratra sur 02/04/2020
Tsy mifidy taona. Nambaran’ny mpitondra tenin’ny Foibe fibaikoana ny ady amin’ny Covid-19 (CCO) Ivato fa nisy tranga vaovao efatra indray, omaly tratran’io valanaretina io. Anisan’izany ny zazalahy 13 taona, avy eto Antananarivo.
Nambaran’ny eo anivon’ny CCO fa nahitana tranga efatra tratran’ny coronavirus, omaly. Vokatry ny fitiliana natao teny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ny nahazoana izany. « Tafakatra 54 izany ireo voaporofo fa tratran’io valanaretina io. Nitombo enina koa ireo tratran’ny coronavirus vokatry ny fifampikasohana ka anisan’izany ireo tranga efatra farany ireo », hoy izy. Nambarany fa nifampikasoka tamin’ilay mpizahantany vahiny ny sasany amin’ireo efatra ireo. Ahitana vehivavy 43 taona sy lehihahy 49 taona ary ilay zazavalahy 13 taona, samy avy eto Antananarivo izy ireo ary tsy misy soritr’aretina. Ilay lehilahy iray 30 taona kosa, any Toamasina ary efa tsaboina ao amin’ny CHU Morafeno.
Mila mailo sy mitandrina
Nanamafy izany filoham-pirenena, alina tamin’ny tafa nifanaovany amin’ny vahoaka malagasy. « Mila mailo sy mitandrina ary maka ny fepetra rehetra isika. Anisan’ny mampihanaka haingana azy ny fifampikasohana mivantana tahaka ny tany Frantsa sy Italia. Mila mifehy tena isika », hoy izy. Notsiahiviny tamin’izany fa anisan’ny nifampikasoka tamin’ilay mpizahantany vahiny ny mpivarotra ravin-kazo teny Isotry ka tratran’izany, niaraka amin’ny zanany, ilay zazalahy 13 taona. Teo koa ny mpiasan’ny orinasa iray any Toamasina sy tatsambo, samy tratran’izany. Nisy vehivavy nitsoaka koa nefa mitondra ny tsimokaretina ary nifampitadiavana. « Tsy maintsy jerena avokoa ireo nifampita­kosina taminy », hoy izy.
Nialoha izany, nanaovany tatitra ny vokatry ny fitiliana tamin’ny alalan’ny TDR, eo amin’ny andro faharoa. 925 ireo notiliana teny amin’ny CCI Ivato ka efatra ireo tratran’ny coronavirus. Mpivady maherin’ny 60 taona sy vehivavy 54 sy 47 taona izy ireo. Tsy nahitana tranga covid-19 kosa ny fitiliana natao teny An­ko- ­rondrano tamin’ireo mpandeha miisa 315. 58 izany izao ireo tratran’ny coronavirus eto amintsika. Ireo fito hafa, afakomaly tamin’ny fitiliana TDR kosa mbola hamarinina eny amin’ny IPM.
Nidina tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny filoha Rajoelina, omaly. Nijery ny fampidirana anaty lasaka ireo fanampiana hozaraina isan-tokatrano, ataon’ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 500. Hisahana ny hetsika « Vatsy tsinjo » izy ireo. “Hafainganina ny asa mba ho tratra ny fizarana fanampiana amin’ny fianakaviana sahirana miisa 25 000”, hoy izy. Miara-miasa amin’izany ireo minisitera sy ny fikambanana Fitia ary ny BNGRC. Iarahana amin’ireo depiote sy ny sefo fokontany ary ny lehiben’ny distrika ny fijerena ny lisitra isam-pokotany. “Handray tambiny10 000 Ar isanandro ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo ary hahazo entana ilaina andavanandro (PPN)”, hoy ny filoha. Hahazo fanampiana koa ireo marefo any Toamasina.
Fitarainana momba ny fanabeazana: mavesatra ho an’ny sekoly tsy miankina ny hetra 24/11/2020
Degmia – Oniversite Toamasina : manana sampam-piofanana roa vaovao 24/11/2020
Fampianarana: mbola maro ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly 24/11/2020
Fampandrosoana eny ifotony: hamondrona ny heriny ny zanak’i Mandrosoa Andramasina 24/11/2020
Fiainana antoko: namboly hazo tany Toamasina ny Arema 24/11/2020